Shiinaha Shimbiraha Warshaddii Muusikada Lapel ee Madow iyo soosaarayaasha | Kingtai
Ku shubista ka dib iftiin caadi ah, u wareeji salka dhabta dhabta mugdiga. Aagga leh budada iftiinka dhalaalaya wuxuu ka ifayaa mugdiga, taas oo si fudud u soo jiidan karta dareenka qof walba.
Waxaan bixinaa midabbo kala duwan oo dhaldhalaal ah oo macaamiisha ay ka kala xushaan, sidaa darteed pin-kaaga caadada ahi wuxuu isticmaali karaa dhaldhalaalka midabbada leh midabbo kala duwan si uu u buuxiyo boosaska kala duwan ama xitaa buuxi dhammaan biinka oo dhan.
Waxaa intaa dheer, budadan khafiifka ah ee khaaska ah ayaa lagu dabaqi karaa shucaaca iftiinka caadiga ah, silsiladda daboolka ah ayaa loo wareejiyay mugdiga, aagga leh budada iftiinka leh ayaa ka ifaya mugdiga, soo jiidanaya dareenka.
Waxaan leenahay midabbo kala duwan oo dhaldhalaal ah oo aan kala dooran karno, sidaa darteed biinankaaga caadada ahi wuxuu isticmaali karaa dhaldhalaalka midabbada leh midabyo kala duwan si uu u buuxiyo boosaska kala duwan ama xitaa buuxi dhammaan pin-ka isaga.
Intaa waxaa sii dheer, budadan khafiifka ah ee khaaska ah ayaa lagu dabaqi karaa cirbadaha jilicsan iyo kuwa adag.
Marka hore, waxaad isbarbar dhigi kartaa dhaldhalaalka adag iyo cirbadaha dhaldhalaalka jilicsan maalin iyo habeenba.
Marka xigta, kahor intaadan dooran dhaldhalaalka mugdiga ah ee biinanka caadada ah, hubi iftiinka boodhadhka kaladuwan ee kaladuwan.
Midabka ugu dambeeya ee cirbadda dhaldhalaalka ah ayaa saameynaya, iyadoo kuxiran midabka budada dhalaalaya ee aan ku darno iyo inta aan ku darno.
Ka dib markaan eegay faahfaahinta sawirka kore, waxaan hubaa inaad dooran doonto dahabka ka dhex dhalaalaya dhaldhalaalka mugdiga ah si aad u habeyso biinka xafladdaada weyn ee soo socota ama munaasabadda gaarka ah.
Budada iftiin leh, oo ku habboon dhaldhalaalka jilicsan iyo biinanka dhaldhalaalka adag.
Waxaan isticmaali karnaa midabbo kala duwan oo ah budada noctilucent si aan u soo saarno isla iftiinka noctilucent, ama waxaan u adeegsan karnaa midab kasta si aan u helno midabka noctilucent ee u dhigma.
Biinanka gaarka ah ee leh dhaldhalaalka dhaldhalaalka madow ayaa loo isticmaali karaa astaanta, taageere, biinanka xusuusta, biinanka koofiyadaha, iwm.
Maaddaama ay tahay astaanta astaanta, waxay ka ciyaareysaa door aan la beddeli karin abuurista jawi kulan iyo muujinta muuqaalka kulanka.
Haddii dhalaalka mugdiga dhaldhalaalka ee loo isticmaalo biinanka caadada ah loogu talagalay in loo isticmaalo biin ku dhejisan koofiyad faneed, waxay noqon doontaa mid aan horay loo arag marka lagu daro riwaayad.
Ama sameysid biinanka caadada ah ee dhalaalaya dhaldhalaalka mugdiga ah si aad ugu abuurto sawir cabsi leh Halloween soo socda, kaas oo kaa dhigi doona boqorka iyo halyeeyada mugdiga Halloween
Hore: Musasalka Lapel Glittering
Xiga: Dhaldhalaalka adag